Maxkamad xukun toogasho ah fulisay - BBC Somali
Maxkamad xukun toogasho ah fulisay
Maxkamadda Ciidamadda ee Soomaaliya ayaa maanta oo axad ah dil toogasho ah ku fulisay labo nin oo dhalinayaro ah oo ay maxkamaddu ku heshay dambi ah in ay dileen labo qof sanadkii tagay. oo midkood uu ahaa weriye sanadkii hore.
Labadaasi qof oo lagu dilay magaalada Muqdisho ayaa mid ka mid ah waxa uu ahaa weriye.
Labada nin ee ay maxkamadu toogatay ayaa la kala oran jiray Cali Bashiir Cusmaan oo 22 sano jir ahaa iyo Cabdullaahi Shariif Cusmaan oo 25 sano jir ahaa waxana la sheegay in ay ka tirsanaayeen ururka Alshabaab.
Maxkamadda Ciidamada ayaa horey ragan ugu xukuntay dil kadib markii ay sheegtay in lagu helay in ay dileen Marxuum la oran jiray Maxamed Maxamuud timacade oo ahaa weriye u shaqaynayay TV-ga Universal oo sanadkii hore Muqdisho lagu dilay iyo Marxuum Cawil Xasan oo ka tirsanaa ciidanka nabad sugida.
Xukunka dilka ah ee ay maanta fulisay maxkamadda ciidamada ee dawladda Soomaaliya ayaa ka dhacay fagaaraha iskuul buliisiiya iyadoo ay joogeen saraakiil ka tirsan ciidanka iyo dadweyne kale.
Maaha markii ugu horeysay ee ay maxkamaddan dil ku fuliso dhalinyaro ay sheegtay in ay ka tirsanaayeen alshabaab.